Tababar ku saabsan Arimaha horumarinta haweenka oo ay maanta soo Xidhay wasiirada Arimaha haweenka caruurta iyo dhalinyarada DDSI. - Cakaara News
Jigjiga(cakaaraNews) Sabti an-11-2014. Wasiirada arimaha haweenka caruurta iyo dhalinyarada DDSI marwo Raxma maxamuud haybe ayaa maanta soo Xidhay tababra mudo 5 maalmood ah ka socday hoolka shirarka ee xarunta dhalinyarada DDSI. Tababarkaa oo ay iska kaashadeen xafiiska arimah haweenka caruurta iyo dhalinyarada DDSI iyo sentient.
Tababarkan Ayaa Waxaa loo qaybtay shaqaale ka socday degmooyinka jigjiga, awbara, gursum iyo waliba qaarka mid ah xafiisyada heer deegaan, waxaana lagu baranayay mudadii uu socday tababarkani arimaha horumarinta haweenka ka qaybgalka haweenka horumarinta arimaha qoyska.
Haddaba waxaa haddalo dhinacyo badan taabanaya ka soo jeedisay xidhitaantii tababarkaa wasiirada arimama haweenka caruurta iyo dhalinyarada marwo Rarma maxamuud haybe. Waxayna sheegtay in lafdhabarta bulsho tahay haweenka iyo dhalinyarada,xukuumada deegaankuna dajisatay qorshayaal lagu horumarinayo arimaha dhalinyarada iyo haweenka. Waxayna sheegay in tababarkanina yahay tababar kor loogu qaadayo garaadka aqooneed ee arimaha haweenka waxaa kale oo ay sheegtay wasiiradu in xafiiska arimaha haweenka isaga oo kaashanaya xafiisyada ay bahwadaagta yihiin in uu hirgaliyay islamarkaan uu dardargalinyo markasta xidhmaha horumarinta dhalinyarada iyo haweenka.
Mar ay wasiirada ka hadlasay dhibaato ku soo koradhay dhalinyarada deegaanka oo ah tahriibta ayaa waxay sheegtay in hada xukuumada DDSI gaadhay horumar taam ah taasi oo ay ka marag ka ceena dalkeena itoobiya dhamaan dawlaha aan dariska nahay iyo beesha caalamkuba waxayna sheegtay wasiiradu in ayna haba yaraatee dhalinyarad deegaanka aanay jirin wax ku kalifa in ay tahriibaan.
Marwo Raxma"Balse uu yahay deegaankeena meel loo soo shaqo iyo waxbarasho tago, waxayna dhalinyarada maskagdooda ku risto dhinaca tahriibtu in ay dareensanaadaan nimcooyinka iyo horomarka ka jira deegaanka taasi oo ayna haysan dawlaha aan dariska nahay. Islamarkaana ay siwayn uga foojignaadaan aafadaasi.
Ugu danbayntii waxay kula dar daaranday ka qaybgalayaashii tababarkaasi in ay gaadhsiiyaan wixii ay ka faa-iidaysteen tababarkaas meelihii iyo xafiisyadii ay ka yimaadeen